Kagi ဇယား - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
တနင်္ဂနွေ, မတ်လ 7, 2021
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Kagi ဇယား
အားလုံးအချိန် frames များကိုဖြတ်ပြီးစျေးကွက်ဦးတည်ချက်နှင့်လမ်းကြောင်းသစ်အစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးအမြင်အာရုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းညွှန်ပြချက်ပေးတစ်ဦးကရိုးရာဂျပန်ဇယားစတိုင်.
အဆိုပါ Kagi ဇယား 20 ရာစု 70 ထဲမှာပေါ်လာဖို့ထင်နေကြတယ်, ဂျပန်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ပထမအဆင့်မှာ. အဆိုပါ Kagi ဇယားအပြန်အလှန်ဒေါင်လိုက်လိုင်းတစ်စီးရီးကိုယ်စားပြု. ဤအလိုင်းများ၏အထူနှင့် increment လမျးညှနျခစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်ကဆုံးဖြတ်ကြသည်. အဆိုပါ Kagi ဇယားအချိန်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဘူး.
စျေးနှုန်းအတူတူဦးတည်ပေါ်ရွှေ့ထားလျှင်, ဇယားအတွက်ဒေါင်လိုက်လိုင်းရှည်ဖြစ်လာ. စျေးနှုန်းတစ်ဦး Pre-defined တန်ဖိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုလျှင် (ပြောင်းပြန်ကိန်း), သစ်တစ်ခုကော်လံအတွက်အသစ်တခုဒေါင်လိုက်လိုင်းဇယားထဲမှာဆွဲရလိမ့်မည်. စျေးနှုန်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ယခင်အများဆုံး / နိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးများကိုကျော်လွန်လာသောအခါ Kagi လိုင်းများ၏အထူပြောင်းလဲ.
အဆိုပါ Kagi ဇယားကြောင့်အမည်ရှိစတိဗ် Nison ရဲ့စာအုပ်ဖို့ USA တွင်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည် “ရွှေမီးခွက်ထက် ကျော်လွန်.”.
အဆိုပါ Kagi ဇယားဘယ်လောက်ဝယ်လိုအား-and ထောက်ပံ့ရေးတပ်ဖွဲ့တွေလုပ်ရပ်သရုပျဖျော. ထူသောလိုင်းများတစ်ဦးက sequence ကိုဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားအထက်ကြောင်းအဘို့ပြောသော (စျေးကွက်ကြီးထွားလာ).
ပါးလွှာသောလိုင်းများတစ်ဦးက sequence ကိုအဆိုပါထောက်ပံ့ရေးဝယ်လိုအားအထက်တွင်ကြောင်းကိုဆိုလိုတယ် (စျေးကွက်ကျဆင်းမှု). အထူပါးလွှာလိုင်းများ Interchange စျေးကွက်မျှမျှတတကြောင်းအဘို့ပြောသော (ထောက်ပံ့ရေးဝယ်လိုအားနှင့်ညီမျှသည်).
တစ်ဦး Kagi ဇယားအပေါ်အခြေခံကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမျဉ်းအထူဖြစ်ပါသည်: ပါးလွှာသောမျဉ်းကြောင်းအထူဖြစ်လာပါလျှင်, သငျသညျကိုဝယ်သင့်ပါတယ်, အပြန်အလှန်လျှင်, သငျသညျရောင်းသင့်တယ်.
တိုးပွားလာအများဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးတစ် sequence ကိုအဆိုပါတက်လျက်ရှိနေသည်ကိုလှုပ်ရှားမှု၏တနျခိုးဘို့ပြောသော, လျော့ကျလာအများဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးအားနည်းစျေးကွက်အတွက်မပြောတတ်.
Porog – ရာခိုင်နှုန်းနောက်ပြန်ဆုတ်ကိန်း
Kagi ဇယားတစ် Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Kagi ဇယားသာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Kagi Charts.mq4 install လုပ်နည်း?
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှမိတ္တူ Kagi Charts.mq4 / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Kagi Charts.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator Kagi Charts.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ Kagi Charts.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?
Next ကိုဆောင်းပါးQuarters Theory